Cortana maka gam akporo nwere ike iji si mkpọchi ihuenyo | Gam akporosis
Mgbe Microsoft gbalịrị ime ka onye enyemaka ya mebere Cortana bụrụ ndị ọzọ na-ewu ewu na sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ Maka ngwaọrụ mkpanaaka, dịka gam akporo ma ọ bụ iOS, na ngwụcha akụkọ a, achọpụtara na ọ dị karịa na Windows Phones na PC.Ọchị zuru oke nke na ọ gbalịrị ịgbatị ikike Cortana na OS ndị ọzọ ma mesịa rapara na PC.
Ezie na PC ahịa-anọgide na-ojuju na Mkpa ekwentị ka hụrụ ka a mara mma nrọ, Redmond mkpa ya Cortana gbagara iji nwetakwuo nlebara anya na nyiwe na ngwa ndị ọzọ maka ụlọ. Ọ bụ na mmelite kachasị ọhụrụ maka ụdị beta nke Cortana maka gam akporo, nke achọtara ihe ọhụụ mara mma.
Otu njirimara ahụ nwere ike inye ya ohere karịa na smartphones na mbadamba na mpụga nke usoro nke onwe ya ma bụrụ n'onwe ya ohere ngwa ngwa nke ụfọdụ chọrọ ịchọrọ maka Cortana mgbe etinyebere ha na mkpọchi mkpọchi na gam akporo. Cortana maka gam akporo enwere ike iji ya na amaala mkpọchi mkpọchi jiri bọtịnụ dị mfe enwere ike itinye ya mgbe emesịrị ngwa site na Playlọ Ahịa Google.
Ozugbo edoziri Cortana biri na mkpọchi ihuenyo, ị nwere ike ịnata ozi dị mkpa na nlele site na ịmegharị akara na akara aka ekpe na aka nri, yana nweta azịza ọsọ ọsọ maka ụfọdụ ajụjụ. Unkpọghe ngwaọrụ adịghị mkpa, yana uru na ọghọm niile nke a nwere ike ibute, yabụ ọ ga-aka mma maka ụfọdụ ndị ọrụ anaghị eche na enwere ike ịnweta ụfọdụ ozi nzuzo site na ihuenyo mkpọchi.
A Cortana nke ahuru obere relegged site na nnukwu mmebi iwu nke Google Assistant na Amazon Alexa. Abụọ mebere na-enyere aka onye nwere ya doro anya nke ọma na ebumnobi setịpụrụ n'ụlọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Microsoft nwalere Cortana maka gam akporo na ihuenyo mkpọchi